Duceysane, Author at Ceelhuur Online - Page 3 of 60
Home > Duceysane > Page 3
February 12, 2020 Duceysane648
Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya inuu weli ka socdo deegaano ka tirsan gobolka dhaq dhaqaaqyo ciidan, iyadoo Maamulka Jubbaland uu labadii maalmood ee la soo dhaafay uu geeyay ciidamo fara badan oo wata gaadiidka dagaalka. Sida wararku sheegayaan Ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland oo ka yimid dhanka degmada Ceelwaaq ayaa gaaray duleedka Beledxaawo […]
February 10, 2020 Duceysane687
Madaxweynaha Maamulka Koofurgalbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya dhismaha baarlamaanka 2aad ee Koofurgalbeed. Guddigan oo ka kooban 10 xubnood oo labo ka mid ah ay yihiin dumar waxaa ay ka mid ah guddoomiye,guddoomiye ku xigeen iyo xoghayn. Lama oga qaabka ay u soo xuli doonaan guddigan xildhibaanada baarlamaanka iyadoo hore ay […]
February 10, 2020 Duceysane622
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey Meertada 33-aad ee Shir Madaxeedka Midowga Afrika ayaa soo bandhigay guulaha uu gaaray dalkeenna iyo fursadaha u baahan in si wadajirka ah looga faa’iideysto Qaaradda ahaan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo a ayaa xusay dadaallada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ay ku dabar-gooynayso khatarta argagixisadu ay […]
February 10, 2020 Duceysane551
Dalalka ku bahoobay urur goboleedka Midowga Afrika ayaa ka soo horjeestay qorshaha nabadda bariga ee madaxweyne Trump dhowaan shaaciyay. Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika, Muuse Faki Maxamed ayaa qudbad uu ka jeediyay Shirweynaha 33-aad waxa uu ku sheegay in Midowga Afrika uu taageerayo qadiyada dadka Falastiin kana soo horjeedo qorshaha Trump ee siyaasadiisa Bariga Dhexe. “Qorshahan […]
February 10, 2020 February 10, 2020 Duceysane704
Xildhibaanada, Senatarada iyo Mas’uuliyiinta Ismaamulka Gobolka Mandhera ee Gobolka waqooyi Bari Kenya oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa ugu baaqay dowladda Kenya inay ka saarto magaalada Wasiirkii Amniga Jubbaland C/rashiid Janan oo dhowaan ka soo baxsaday dowladda Soomaaliya iyo Ciidamo uu wato. Qaar ka mid ah Xildhibaanada iyo Senatarada laga soo doorto Gobolka […]
Taliska qeybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in xal laga gaaro colaad u dhaxeysay labo maleeshiyo beelood oo horay ugu dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Labada maleeshiyo beeleed ayaa horay ugu dagaalamay deegaano ku dhow degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan, waxaana dagaalkaas uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh. […]
February 10, 2020 Duceysane1104
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in xiisad dagaal ay ka jirto magaalooyinka Beled-Xaawo iyo Mandhera oo ku kala yaal xadka kala qeybiya dalka Soomaaliya iyo Kenya. Xiisadan ayaa salka ku haysa kadib markii ay fariisimo ka dhex sameysteen gudaha magaalada Mandhera ee dalka Kenya ciidamo daacad u ah maamul goboleedka Jubbaland oo uu hoggaaminayo Wasiirka […]
February 9, 2020 Duceysane9412 Comments on Xildhibaan mahad salaad”Sharciga batroolka sooma marin habraaca sharci dajinta:
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in sharciga Batroolka ee Aqalka Sare soo gudbiyay 8-dii bishii Janaayo, isla markaana uu saxiixay Madaxweynaha 8-dii February 2002 ee shalay aysan soo marin habraaca sharci dejinta dalka. Qoraal uu Mahad Salaad u diray Madaxweyne Farmaajo, Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo […]
February 9, 2020 Duceysane542
Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka inay si dhow ula socdaan xaalada ka taagan Soomaaliya, gaar ahaan tan Jubbaland. Maxamuud Sayid oo ku sugan meel ku dhow Beledxaawo ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka inay qalqal gelin amni iyo buburin hey’adihii soo kobcayay ay ka wado Jubbaland. Waxaa uu sheegay in […]
February 9, 2020 Duceysane566
Wararka ka imaanaya degmada Waajid ee Gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay shalay gelinkii dambe labo askari Itoobiyaan ah, kana furteen hubkii ay wateen. Al-Shabaab ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in labo ka tirsan Ciidamada Itoobiya ay ku dileen deegaan ka tirsan Gobolka Bakool Sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegay […]